Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Ny fiaramanidina dia nibontsina fiaramanidina MAX 737 taorian'ny nampitandreman'i Boeing ny olana vaovao mety hitranga
Niondrana fiaramanidina MAX 737 ny Airlines taorian'ny nampitandreman'i Boeing momba ny 'olana mety hitranga' vaovao
United Airlines, American Airlines ary Southwest Airlines no nisintona fiaramanidina maherin'ny 737 MAX tsy hanompoana intsony
Boeing dia manolo-kevitra ny mpanjifa 16 hamaha ny olana mety hitranga amin'ny alàlan'ny fiaramanidina 737 MAX
Boeing dia miara-miasa akaiky amin'ny FAA amin'ny famahana ny olana
Raha ny filazan'i Boeing dia tsy misy ifandraisany amin'ny rafitra mifehy ny sidina ny olana vaovao
Boeing dia namoaka ity fanambarana manaraka ity androany momba ny 'olana mety hitranga' miaraka amin'ny fiaramanidina MAX 737 eo ho eo:
"Boeing dia nanolo-kevitra ny mpanjifa 16 mba hamaha ny olana mety hitranga amin'ny herinaratra amin'ny vondrona manokana 737 MAX fiaramanidina alohan'ny asa hafa. Ny tolo-kevitra dia natao mba hamaritana ny fanamarinana fa misy lalan-tany ampy ho an'ny singa iray amin'ny rafi-kery herinaratra.
Miara-miasa akaiky amin'ny US Federal Aviation Administration momba ity olana famokarana ity izahay. Izahay koa dia mampahafantatra amin'ny mpanjifantsika ny isa manokana amin'ny rambony voakasik'izany ary hanome torolàlana momba ny hetsika fanitsiana sahaza izahay. “
Nilaza i Boeing fa ny olana momba ny herinaratra dia hita tamin'ny fiaramanidina teo amin'ny tsipika famokarana. Nilaza ity mpanamboatra fiaramanidina ity fa miara-miasa akaiky amin'ny FAA izy amin'ny famahana ny olana.
Araka ny voalazan'i Boeing, ny olana vaovao, izay mety tsy mitombina tsara ny singa iray ao amin'ny rafitra herinaratra, dia tsy misy ifandraisany amin'ny rafitra mifehy ny sidina.
Taorian'ny famoahana an'i Boeing momba ny 'olana' vaovao 737 MAX, United Airlines, American Airlines ary Southwest Airlines dia nanintona fiaramanidina 737 MAX am-polony avy amin'ny serivisy ho an'ny 'fanaraha-maso' ny rafitra elektrika fiaramanidina.
Nilaza ny Alaska Airlines fa nesoriny ihany koa ny jet efatra an'i Max tamin'ny serivisy “hahafahana manao fizahana sy asa anaovana.”
Ny sidina 737 MAX dia niverina nanidina tamin'ny Desambra 2020 taorian'ny nankatoavan'ny mpandrindra tany Etazonia, Eoropeana, Kanadiana ary Breziliana ny fanovana nataon'i Boeing tamin'ny rafitra fanaraha-maso sidina mandeha ho azy izay nandray anjara tamin'ny lozam-pifamoivoizana.